I-SAFEChemicalPolicy.org Archives - Ilungelo Lokwazi lase-US
I-Trump Talk Of Pompeo yeKhabinethi Ingapela Ukubuyiselwa Emuva Kwabathengi
Posted on November 18, 2016 by UCarey Gillam
Izindaba zokuthi uMengameli okhethwe nguMengameli uDonald Trump kucatshangelwa uMmeli waseMelika. UMike Pompeo ngoba indawo ekhishwe yiKhabhinethi ibonisa ukuthi izinsuku ezingaphambili zingaba mnyama kanjani “ekunyakazeni kokudla” okwandayo kwaseMelika, obekulwela ukuthi kube sobala kakhudlwana kanye nezibulala-zinambuzane ezimbalwa ekukhiqizeni ukudla.
UPompeo, oyiRepublican evela esifundazweni saseKansas, wayengumshayi oqokiwe weMonsanto Co kanye nabanye abadlali beBig Ag yamakhemikhali nembewu ngonyaka we-2014 lapho imboni ikhipha umzamo wenhlangano ukuvimba amazwe ukuthi agunyaze ukufakwa kwelebuli kokudla okushintshwe izakhi zofuzo. UPompeo wethule i- "Safe and Accurate Food Labeling Act" ngo-Ephreli walowo nyaka ngenhloso yokweqa izikweletu cishe ezifundeni ezimbili.
Ngokuletha lo mthetho-mali phambili, uPompeo wayemele iGrocery Manufacturers Association (GMA), emele intshisekelo yezinkampani ezinkulu zokudla neziphuzo zesizwe. Lo mthethosivivinywa, abagxeki abawubiza ngokuthi yi- "Deny Americans the Right to Know" Act, noma i- "DARK Act," udlule eminyakeni emibili yokuphikisana nokuyekethisa ngaphambi kokuba kudlule uhlobo futhi usayine waba ngumthetho nguMongameli uBarack Obama kuleli hlobo. Umthetho wahoxisa umthethosivivinywa ophoqelelwe ukuba usebenze eVermont ngoJulayi walo nyaka, futhi wanikeza izinkampani izinketho zokugwema ukusho emaphaketheni abo ukuthi umkhiqizo unezithako ze-GMO noma cha.
UPompeo uzibonakalise "engunodoli" wezintshisekelo ezikhethekile, futhi uma eqokelwa esikhundleni esiphakeme ekuphathweni okusha, kungasho ukubuyela emuva okukhulu kubathengi, ngokusho kuka-Andrew Kimbrell, umqondisi omkhulu weCentre for Food Safety .
"Ukukhetha okubi kakhulu engicabanga ngakho," kusho uKimbrell ngoPompeo. “Ngaphandle kokukhipha ixhaphozi, uPompeo uyisidalwa“ sexhaphozi ”sokugcina. Ungudoli nje wezinkampani ezinkulu zamakhemikhali nezama-biotech. ”
Amaqembu abathengi aphoqele ukufakwa ilebuli okuyimpoqo iminyaka ngenxa yokukhathazeka ukuthi izitshalo ezakhiwe ngezakhi zofuzo emakethe manje zithwala ubungozi obungaba khona kanye nempilo yabantu kanye nemvelo. Ukukhathazeka okuyinhloko kuhlobene nokuthi izitshalo eziningi ze-GMO zifuthwa nge-glyphosate herbicide, isithako esisebenzayo kumkhiqizo we-Roundup kaMonsanto. Inhlangano Yezempilo Yomhlaba isimemezele ukuthi i-glyphosate a mhlawumbe umdlavuza womuntu, nezinsalela ze-glyphosate ziyanda ukutholwa ekudleni okusetshenziswa kakhulu.
Ithimba lezinguquko likaTrump liphendula labo abakhathazekile ngabathengi mayelana nezibulala-zinambuzane alibukeki liqinisekisa futhi. UTrump uqambe igama UMyron Ebell, umqondisi weCentre for Energy and Environment e-Competitive Enterprise Institute, ukuhola imizamo yezinguquko kwa-Environmental Protection Agency (EPA). Lezi izindaba ezijabulisayo embonini yezolimo ngoba u-Ebell ubonakala enjalo umlandeli omkhulu wezibulala-zinambuzane.Elakhe SAFEChemicalPolicy.org Iwebhusayithi ilwela ukuphepha nezinzuzo zamakhemikhali asetshenziswa kwezolimo nakwezinye izindawo, kanye nocwaningo lwezaphulelo olubonisa ukulimala
"I-EPA kufanele isivikele kumakhemikhali ayingozi, hhayi ukuwavikela, njengoba u-Ebell ezokwenza uma elawula le nhlangano," kusho isitatimende se-Environmental Defense Fund.
(Lo mbhalo uqale ukuvela ku- I-Huffington Post)
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, Ukukhangisa Isikhungo Samandla Nezemvelo e-Competitive Enterprise Institute, Ukudla, glyphosate, I-GMA, I-GMO, Inhlangano Yabenzi Begilosa, UKUQALA, Mike Pompeo, Monsanto, UMyron Ebell, ezombusazwe, SAFEChemicalPolicy.org, trump